‘साग’ मा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन उच्चकोटीको भन्दै पूर्व राजा शाहद्वारा बधाई ज्ञापन – khabartime
२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०७:१४ 23 पटक हेरिएको
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाली खेलाडीहरुको उच्चकोटीको प्रदर्शनको प्रशंसा गरेका छन् । उनले मुलुकलाई दिलाएको सफलताप्रति खेलाडीहरुलाई बधाई ज्ञापन पनि गरेका छन् ।
आज (मंगलबार) साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले खेलाडीले दिलाएको सफलताले आफु पनि हर्षित बनेको उल्लेख गर्दै नेपालले खेल क्षेत्रमा गरेको विकासका लागि पनि शुभकामना दिएका छन् ।
उनले आगामी दिनहरुमा पनि नेपाली खेलाडीहरुले खेलकुद क्षेत्रमा यस्तै सफलता कायम राख्न सकुन भन्ने कामना गर्दै १३ औं साग खेलकुद सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा आयोजक एवं व्यवस्थापक सबैप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका छन् ।
बौद्धमा घट्यो अनौठो घटना ! सम्बन्ध टुटेपछि युवतीले काटिदिइन् प्रेमीको लिङ्ग
प्रेममा धोका पाएपछि मानिसले के-के गर्लान् ? हात का’ट्ने र आ’त्मह’त्या गर्ने गरेका विषय नौला होइनन् । काठमाडौंको बौद्धमा भने अर्को एउटा अनौठो घ’टना भएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका अनुसार प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने देखेपछि १९ वर्षीया थिङ थरकी युवतीले प्रेमीको लि’ङ्ग नै काटिदिएकी छन् ।
घ’टनामा मकवानपुर घर भइ बौद्ध बस्दै आएका २१ वर्षीय सुनुवार थरका व्यक्ति सख्त घा’इते भएका छन् । ती व्यक्ति काठमाडौंको एक होटलमा कर्मचारी हुन् । बौद्धका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहका अनुसार सुनुवारको ओम अस्पतालमा आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार केटा क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्छन् भने युवती बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुबीच हालै विछोड भएको थियो । प्रहरीले युवतीलाई पनि प’क्राउ गरेको छ भने अ’पराधमा प्रयोग भएको च’क्कु पनि बरामद गरेको छ ।